5 Zvishandiso Zvekubatsira Kuenzanisa Kushambadzira Kwako Panguva Yezororo | Martech Zone
Muvhuro, October 3, 2016 John Theis
Mwaka weKisimusi wekutenga ndeimwe yenguva dzakakosha kwazvo dzegore kune vatengesi nevashambadzi, uye mishandirapamwe yako yekutengesa inofanirwa kuratidza kukosha uku. Kuva nemushandirapamwe unoshanda kunozoita kuti mhando yako iwane kutarisirwa kwakakodzera panguva inobatsira zvikuru yegore.
Munyika yanhasi nzira yepfuti haichazocheka kana uchiedza kusvika kune vatengi vako. Mhando dzinofanirwa kushandura yavo yekushambadzira kuyedza kuzadzisa zvido zvevatengi. Inguva yakwana yekuti titange kuvaka mishandirapamwe yezororo yakakosha, saka isu takanyora runyorwa rwezvishandiso zvepamhepo kubatsira mukuedza kwako kuratidza kushambadzira kwako.
Izvo hazvishamise kuti Google yakwanisa kugadzira iyo inonyanya kufarirwa webhu analytics sutu munyika, ne Google Analytics. Iyi software inopa ruzivo senge ndiani ari kushanyira saiti yako, masvikiro avakaita ikoko, uye anokuzadza iwe pane zvavanoita kana vangova pawebhusaiti yako. Shandisa iri ruzivo rutsva kuti uwane ako anobatsira kwazvo zvikamu zvevatengi uye gadzira yekutengesa mameseji zvinoenderana.
Google Analytics yakakwana kune mabhizinesi makuru uye madiki sezvo suite inowanikwa pane freemium modhi. Pane yakakwira nhanho yesoftware pane kuwanikwa kweiyo SDK yekuongorora mashandiro eiyo nhare mbozha yako nevatengi.
Salesforce Kushambadzira Cloud
Salesforce Kushambadzira Cloud chishandiso chinoshamisira chekutumira maSMS uye kusundira zviziviso seyambiro dzenhare, maneja kushambadzira email, kugadzirisa kushambadzira kushambadza neCRM data, uye kuunganidza maitiro evatengi ekuvhura.
Kubatanidza maturusi aya kunopa mikana isingaverengeke yekugadzira izwi rechiratidzo rinoenderana pane ako ese ekushambadzira. Chishandiso chega chega chinobvumidza nzira dzakawanda dzekutevera maitiro evatengi uye inokutendera iwe kunongedza chikamu chimwe nechimwe pachako. Kumwe kudonha ndekwekuti Salesforce inouya nemutengo unorema, iyo inogona kunge isingaitwe kumakambani mazhinji madiki.
Inventory inogona kuve nesimba rakasimba pamabatiro aunosarudza kushambadzira kune vatengi vako. Kunyangwe iwe uri kuyedza kusimudzira chinhu chakanamatira pamashefu ako kwemavhiki, kana kushambadza chitsva chinotumirwa chemutengesi wakanakisa, iwe uchazoda chishandiso chekushandisa manejimendi. BizSlate inouya.
Mhinduro dzekuverengera uye kuronga manejimendi, kugoverwa kwenhamba, uye accounting, e-commerce uye kusangana kweEDI kunoita kuti iyi software ive yakakwana kumabhizimusi madiki nepakati nepakati. Kunyanya kukosha, inokutendera iwe kuteedzera izvo vanhu vanotenga, zvichikubatsira iwe kutungamira kushambadzira kwako mune ramangwana kuedza.
Kana BizSlate isina kukodzera bhizinesi rako, pane akaurayiwa ezvimwe zvigadzirwa zvekutarisira zvigadzirwa izvo zvinogona kukodzera zvaunoda.
Kana iwe uri kutsvaga kuburitsa inotungamira yako bhizinesi epamhepo mafomu akadzika mune ako mawebhusaiti, zvemagariro midhiya kana maemail anogona kuve makuru maturusi. Formstack inobatsira iwe kugadzira inokurumidza uye yakapusa tsika mafomu uye inoita kuti iwe uongorore yavo yekushandura mareti uye kuyera mashandiro avo. Iyo software inokubatsira kuyedza mafomu ako uye nekuwana akabudirira kwazvo mavhezheni emafomu ako ekutora ekutora. Pamusoro pezvo, iwe unogona kuona zvirimo zvemafomu-akazadzwa mafomu asina kumbotumirwa.
Paunenge iwe washandisa mafomu ako epamhepo kutora lead iwe unogona kushandisa fomu nyowani kusundira kutengesa. Wadii kushandisa imwe fomu kubatanidzazve vatengi mushure mekutenga kwavo nefomu rekupindura rinoenderana nekutenga kwavo?
Email pane Acid
Email kushambadzira inogara iri yakakosha pane chero nzira yekutengesa, uye iwe unofanirwa kugara uchinetseka nezvekuti maemail ako anotaridzika sei kune vatengi vako mumabhokisi avo emabhokisi. Maemail ako anofanirwa kubata ziso achigara akatendeka kuchako chako. Iwe unoda kuti maemail ako ataridzike mune ese email mutengi mavanogona kutariswa. Kana izvi zvikaita senge zvakaoma, usazvidya moyo, Email pane Acid inowanikwa kubatsira.
Iyo puratifomu inobvumidza kugadzirwa kweemail maemail mune yepamhepo edhisheni, kuti iwe ugone kuongorora yako email kutaridzika muhuwandu hwevatengi, kukwidziridza kodhi kune yega, uye kutarisa mashandiro emeseji ako ne analytics Suite. Shandisa izvi maficha kuti ubatsirwe uye ugadzire zvakanyatsoenderana nemaemail kuti ubatanidze vatengi vako uye uwedzere kufarira mukutenga.
Iye zvino zvaunenge uine maturusi aunoda kuti ugadzire ako ekushambadzira ezororo zvirongwa, unogona kusvika kubasa kugadzira mazano ako. Chinokosha chebudiriro kutanga mangwanani, zvichikubvumidza kuti uedze zvakakwana mushandirapamwe wako, uye woita chero gadziridzo nguva dzezororo dzisati dzauya pano. Kuita yako yekushambadzira mameseji ichaita kuti chiratidzo chako chione kubudirira mwaka uno.
Tags: email pane acidgoogle analyticssalesforce kushambadzira gore
John Thies ndiye CEO uye Co-Muvambi we Email pane Acid, sevhisi inopa vatengesi veemail muono wekuti maemail avo anoratidzwa sei mumakomputa eemail anozivikanwa uye nharembozha. Anogara muDenver, Colorado nemukadzi wake nemwanakomana. Paanenge asiri kushanda angave ari munzira yegorofu kana yechando kubhodhi muiyo nyowani Colorado poda.
Tinogona Kufadza Kuti Tive Nani Pakushambadzira Pedu?